Tsarasaotra-Ivato: lalana lafo indrindra eto Madagasikara | NewsMada
Tsarasaotra-Ivato: lalana lafo indrindra eto Madagasikara
Vola nindramina tamin’ny banky sinoa, ary haverin’ny taranaka malagasy tsirairay ny nanaovana ny lalana vaovao Tsarasaotra-Ivato. Midangana tokoa ny vidiny satria mitentina 16 miliara Ar ny iray kilometatra, tsy fahita mihitsy teto Madagasikara.
Efa notaterina teto fa nisokatra, nanomboka ny 1 novambra teo, ny lalam-baovao Tsarasaotra – Ivato. Mitentina maherin’ny 184 miliara Ar ity lalana natao godirao ity, mirefy 10,93 km, nindramina tamin’ny banky sinoa, Banque Import-export de Chine. Rehefa atao ny kajy, mitentina 16,72 miliara Ar ny lalana iray kilometatra. Azo adika fa lalana lafo indrindra eto Madagasikara ity lalana ity, satria raha tombanana manodidina ny 5 miliara Ar ny salambidin’ny tetimbidin’ny lalana vita godirao iray kilometatra eto amintsika, mahatratra 16,72 miliara/Km ity lalam-baovao ity.
Ho an’ny lalam-pirenena fahenina (RN 6), natao ny taona 2006-2008, nitentina 80 tapitrisa euros ny ampahan-dalana mirefy 309 km (1 euro= 2.500 Ar ny taona 2006), manome manodidina ny 200 miliara Ar. Izany hoe, mitentina 667 tapitrisa Ar ny lalana iray kilometatra.
Asa tsy vita tamin’ny Frankofonia
Azo raisina fa fandaniam-bola mihoampampana ity fanamboaran-dalana Tsarasaotra –Ivato ity. Tsy misy fanazavana antsipiriany sy mangarahara nomen’ny fanjakana ankoatra io famatsiam-bola 184 miliara Ar io. Tsy adinon’ny rehetra anefa, fa niato antenantenany ity fanamboaran-dalana ity, satria tsy vita hatramin’ny farany ny taona 2016, nisian’ny fivoriambe Frankofonia. Nisy vola tsy voaloa ve na famatsiam-bola nanjavona, ka nonerana tamin’ity 184 miliara Ar ity?
Tsiahivina fa tsy vita hatramin’ny farany koa ny tranoben’ny Frankofonia etsy Andohatapenaka, ary hitan’ny rehetra ao ny rindrina sisa mijoro, fa nihantona antenantenany ny asa. Tsy misy mangarahara koa mikasika azy io, fandaniam-bolan’ny fitondran-dRajaonarimampianina.